Qajelfama adabbii warra hin baaneef pdf – Mana Hoji Abbaa Alangaa Godina Jimmaa. የጅማ ዞን አቃቤህግ ፅፈት ቤት፣
Adabbiin Tarkaanfii seeraa namootaa gochaa yakkaa jedhamee seera yakkaa keessa jiru raawwatan irratti fudhatamuu dha(murtaa’u dha). Adabbiin kan murtaa’uu sababiin yakkii wal fakkataan gara fuulduraa akka hin raawwatamne ittisuuf namni yakka raawwate jedhamee sunis amala isaa akka sirreeffatuu fi dha.
Bu’urumaa kanaan qajeelfamni 2/2006 kun yakkoota murasaa fi yeroo hedduu biyyaa keenyaa keessatti raawwatamaaniif sadarkaa fi gulantaa ifa ta’e baaseera.
Kaayyoon barreeffamaa kanaas Godina keenaa keessatti hojiin Abbootrii Alangaatti waan baay’atuuf hojii si’aayinaa fi qulqullina qabu hojjechuuf Abbaan Alangaa kamiyyuu waayita dhaddacha seenu qajeelfamaa adabbii kana haala salphaan fudhatee akka seenuuf akkataa qajeelfamaa adabbii 2/2006 kew.19tiin yakkoota yeroo hedduu Godina keenyaa keessatti raawwataman sadarkaa fi gulantaan hin baaneef akka ba’ee waajjira keessa taa’uuf qopheessuun barbaachisaa ta’ee argameera.
federal casation decision pdf v10